Che: Part One (2008) | MM Movie Store
ရုပျရှငျရဲ့ ပထမပိုငျး – Che နဲ့ Fidel Castro တို့ တှဆေုံ့ကွရာကနေ ကြူးဘားတိုငျးပွညျကွီးကို နောကျဆုံး အာဏာရှငျအစိုးရ မပွုတျပွုတျအောငျ ဗငျြးကွတဲ့ အထိ ကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ ၁၉၆၄ မှာ ကြူးဘားနိုငျငံကိုယျစား UN စငျမွငျ့ပျေါတကျပွီး မိနျ့ခှနျးပွောနတေဲ့ Che ရယျ . . .
၁၉၅၆ တောကျလြှောကျမှာ သနေတျကိုငျထားတဲ့ တျောလှနျရေးသမားကွီး Che ရယျ . . ဆိုတဲ့ Che ရဲ့ life event နှဈခုကို ယှဉျပွီး ပွထားပါတယျ။ရုပျရှငျရဲ့ ဒုတိယပိုငျး – ၁၉၆၆ နောကျပိုငျး။ Fidel Castro က တဈနိုငျငံလုံးကို မိနျ့ခှနျးပွောနတေယျ။
Che ဟာ ကြူးဘား အစိုးရအဖှဲ့ကနေ နှုတျထှကျသှားပွီဆိုတဲ့အကွောငျး။ နောကျတဈနမှေ့ာတော့ ထိပျပွောငျပွောငျနဲ့ အမှေးမရှိ အမြှငျမရှိအောငျ ရုပျဖကျြထားတဲ့ Che ဟာ ဘိုလီးဗီးယား (Bolivia) တိုငျးပွညျထဲကို တိတျတိတျကလေးရောကျသှားပွီး တျောလှနျရေးအသဈတဈခုကို စတငျဖို့ ပွငျနပေါတော့တယျ။
(Guerrilla ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Part Two မှာ တောကျလြှောကျတှရေ့လိမျ့မယျ။ အဲ့ဒါက သိတဲ့သူအဖို့တော့ မခကျခဲပမေယျ့ မသိတဲ့ သူမြားအတှကျ နညျးနညျး ရှငျးပွ ပါရစေ။ Guerrilla Warfare ဆိုတာ နိုငျငံတကာ တျောလှနျရေးလို့ အလှယျဆုံး ဘာသာပွနျလို့ရပါတယျ။
Che ဟာ ကြူးဘားတျောလှနျရေးပွီးတဲ့နောကျမှာ တခွားနိုငျငံတှရေဲ့ တောနကျကွီးထဲဝငျပွီး လကျနကျဆှဲကိုငျလို့ အဲ့ဒီနိုငျငံတှရေဲ့ အာဏာရှငျအသီးသီးကို လိုကျ ခမြှေုနျးဖို့ လုပျပါတယျ။ အဲ့လို ကိုယျ့နိုငျငံသူ့နိုငျငံမခှဲခွားပဲ လကျနကျကိုငျ တျောလှနျရေး လိုကျလုပျတဲ့ ရဲဘျောမြားရဲ့ လှုပျရှားမှုကို Guerrilla Warfare လို့ ချေါပါတယျ။
Part Two မှာ Che က ဘိုလီးဗီးယားကို ရောကျသှားတာ Guerrilla Movement ကို ဦးဆောငျဖို့ပါ)Che ရုပျရှငျရဲ့ ဇာတျညှနျးကို လူသုံးယောကျ ဝိုငျးရေးပေးခဲ့တယျ။ Peter Buchman ရယျ Benjamin A. van der Veen ရယျ Terrence Malick ရယျပါ။
ဆရာကွီး သုံးယောကျရဲ့ လကျရာက Che ရုပျရှငျကို အကွီးအကယျြ ရုပျလုံးကွှ ပွညျ့စုံ သှားစခေဲ့တယျ။ကြှနျတျောပွောခဲ့သလိုပဲ။ Che ဆိုတာ အပွငျလောကမှာ ဘယျလောကျ ကွီးကယျြနပေါစေ။ ဒီ ရုပျရှငျမှာတော့ သာမနျလူသားတဈယောကျပါပဲ။
ဇာတျလမျးအစမှာတငျ ပနျးနာရငျကပျြရောဂါသညျ Che ဟာ တောကွီးမကျြမညျးထဲမှာ အသကျတောငျ ကောငျးကောငျးမရှုနိုငျတော့လို့ သူ့ရဲဘျောက သူ့အိတျကို ဝိုငျးသယျပေးရတဲ့ အဖွဈ။တဈဖှဲ့လုံး Maxico မှာ စဈပညာသငျထားခဲ့ပမေယျ့ တကယျ့ လကျတှတေ့ျောလှနျရေးဆငျနှဲတဲ့အခါမှာတော့ Che တို့ တဈသိုကျ တိုငျပတျနခေဲ့ကွတယျ။
အရေးထဲ Fidel ကွီးက အားရပါးရ ခြိနျပွီး ရနျသူကို ပဈထညျ့လိုကျတာ အလှဲကွီးလှဲသှားသေး . . . ။ဒါပမေယျ့ Che တို့ရဲ့ ဦးဆောငျမှု တိုးတကျပွောငျးလဲမှုအောကျမှာ လူ ၈၀ နဲ့ စ ခဲ့တဲ့ တျောလှနျရေးလေးက တဖွညျးဖွညျး ကွီးပွငျးလာတာကို ဒီကားမှာ မွငျသလောကျ မွငျရမယျ။
Che ရှာသားတှကေို ကိုယျ့မိသားစုဝငျမြားပမာ ဆကျဆံကွတယျ။ ပိုကျဆံမပေးပဲ ရှာသားတှဆေီက ဘာ ပစ်စညျးမှ ယူခှငျ့မရှိဘူး။ တျောလှနျရေးလုပျတဲ့ သူပုနျတပျဆိုပမေယျ့ အရမျးစညျးကမျးရှိတယျ။ မုဒိနျးမှုသာ ကြူးလှနျကွညျ့ပါလား။ ခကျြခငျြး သဒေဏျပေးခံရမယျ အဲ့စဈသား . . ။
“ ဆရာ . . ရနျသူ့တပျက အတျော စနဈကတြယျ။ ဆေးရုံတောငျ ရှိတယျ ” ဆိုတဲ့ အာဏာရှငျဘကျက တပျမှူးရဲ့ ပွောစကားကို ဒီကားမှာ ကွားရမယျ။အဲ့ဒါတှထေကျ ပိုကွီးအရေးကွီးတာ တဈခကျြရှိတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကားကို စဈကားလို့ ယူဆပွီး ကွညျ့မယျ့သူတှကေို ပွောခငျြတာပါ။
အမှားကွီး မှားသှားပါလိမျ့မယျနျော။ ဘာလို့ဆိုတော့စဈကားမို့ ပဈတာခတျတာ ဗုနျးကှဲတာတှကေို အရမျးလှတဲ့ shot တှနေဲ့ စဈသားတှေ စတိုငျမိမိ ပွေးလှားနတောတှေ လုံးဝ မွငျရမှာ မဟုတျပါဘူး။“ သတငျးထောကျ။ ။ တျောလှနျရေးကို ဘယျလိုမွငျပါသလဲChe ။ ။
ကွီးမားတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဓာတျ မရှိပဲ တျောလှနျရေးကို လုပျကို လုပျလို့မရပါဘူး ”ဟုတျပါတယျ။ အဲ့အတိုငျးပါပဲ။ Che ရဲ့ စကားလိုပါပဲ . . ဒီ ဇာတျညှနျးကွီးတဈအုပျလုံးမှာလညျး ခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ လူသားဆနျမှု၊ အမှား အမှနျ၊ ရှာသားတှနေဲ့ တျောလှနျရေးစဈသားတှရေဲ့ ဆကျဆံရေး၊ အထူးဖွငျ့ Che ရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆနျတဲ့ ဘဝကိုသာ မွငျရမှာပါ။
တဈခါတလေ စဈပှဲ တဈပှဲလုံးကို သနေတျပွောငျးက ကညျြထှကျနတောပဲ ပွပွီး ပွီးရငျလညျး ပွီးသှားပါတယျ။ စဈ တကယျဖွဈနတောကို ပွရငျလညျး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးကွီးပဲ ပွပါတယျ။ ဘာမှ မကှနျ့ထားဘူး။ဒီကားရဲ့ ဇာတျညှနျးဟာ . . not about ဒုနျးဒုနျးဒကျဒကျ ပါ။ it’s about loving kindness ပါဗြာ . . ။
ဒီတော့ ခခြနျးပါမှ ကွိုကျမယျဆိုရငျတော့ Che က ရှောငျသငျ့တဲ့ ကားပါ။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ ပထမပိုင်း – Che နဲ့ Fidel Castro တို့ တွေ့ဆုံကြရာကနေ ကျူးဘားတိုင်းပြည်ကြီးကို နောက်ဆုံး အာဏာရှင်အစိုးရ မပြုတ်ပြုတ်အောင် ဗျင်းကြတဲ့ အထိ ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ၁၉၆၄ မှာ ကျူးဘားနိုင်ငံကိုယ်စား UN စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောနေတဲ့ Che ရယ် . . .
၁၉၅၆ တောက်လျှောက်မှာ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားကြီး Che ရယ် . . ဆိုတဲ့ Che ရဲ့ life event နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီး ပြထားပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဒုတိယပိုင်း – ၁၉၆၆ နောက်ပိုင်း။ Fidel Castro က တစ်နိုင်ငံလုံးကို မိန့်ခွန်းပြောနေတယ်။
Che ဟာ ကျူးဘား အစိုးရအဖွဲ့ကနေ နှုတ်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့ အမွှေးမရှိ အမျှင်မရှိအောင် ရုပ်ဖျက်ထားတဲ့ Che ဟာ ဘိုလီးဗီးယား (Bolivia) တိုင်းပြည်ထဲကို တိတ်တိတ်ကလေးရောက်သွားပြီး တော်လှန်ရေးအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့ ပြင်နေပါတော့တယ်။
(Guerrilla ဆိုတဲ့စကားလုံးကို Part Two မှာ တောက်လျှောက်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါက သိတဲ့သူအဖို့တော့ မခက်ခဲပေမယ့် မသိတဲ့ သူများအတွက် နည်းနည်း ရှင်းပြ ပါရစေ။ Guerrilla Warfare ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ တော်လှန်ရေးလို့ အလွယ်ဆုံး ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။
Che ဟာ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ တောနက်ကြီးထဲဝင်ပြီး လက်နက်ဆွဲကိုင်လို့ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ အာဏာရှင်အသီးသီးကို လိုက် ချေမှုန်းဖို့ လုပ်ပါတယ်။ အဲ့လို ကိုယ့်နိုင်ငံသူ့နိုင်ငံမခွဲခြားပဲ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး လိုက်လုပ်တဲ့ ရဲဘော်များရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Guerrilla Warfare လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Part Two မှာ Che က ဘိုလီးဗီးယားကို ရောက်သွားတာ Guerrilla Movement ကို ဦးဆောင်ဖို့ပါ)Che ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို လူသုံးယောက် ဝိုင်းရေးပေးခဲ့တယ်။ Peter Buchman ရယ် Benjamin A. van der Veen ရယ် Terrence Malick ရယ်ပါ။
ဆရာကြီး သုံးယောက်ရဲ့ လက်ရာက Che ရုပ်ရှင်ကို အကြီးအကျယ် ရုပ်လုံးကြွ ပြည့်စုံ သွားစေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ။ Che ဆိုတာ အပြင်လောကမှာ ဘယ်လောက် ကြီးကျယ်နေပါစေ။ ဒီ ရုပ်ရှင်မှာတော့ သာမန်လူသားတစ်ယောက်ပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းအစမှာတင် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည် Che ဟာ တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ အသက်တောင် ကောင်းကောင်းမရှုနိုင်တော့လို့ သူ့ရဲဘော်က သူ့အိတ်ကို ဝိုင်းသယ်ပေးရတဲ့ အဖြစ်။တစ်ဖွဲ့လုံး Maxico မှာ စစ်ပညာသင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာတော့ Che တို့ တစ်သိုက် တိုင်ပတ်နေခဲ့ကြတယ်။
အရေးထဲ Fidel ကြီးက အားရပါးရ ချိန်ပြီး ရန်သူကို ပစ်ထည့်လိုက်တာ အလွဲကြီးလွဲသွားသေး . . . ။ဒါပေမယ့် Che တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှု တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအောက်မှာ လူ ၈၀ နဲ့ စ ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးလေးက တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာတာကို ဒီကားမှာ မြင်သလောက် မြင်ရမယ်။
Che ရွာသားတွေကို ကိုယ့်မိသားစုဝင်များပမာ ဆက်ဆံကြတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးပဲ ရွာသားတွေဆီက ဘာ ပစ္စည်းမှ ယူခွင့်မရှိဘူး။ တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ သူပုန်တပ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းစည်းကမ်းရှိတယ်။ မုဒိန်းမှုသာ ကျူးလွန်ကြည့်ပါလား။ ချက်ချင်း သေဒဏ်ပေးခံရမယ် အဲ့စစ်သား . . ။
“ ဆရာ . . ရန်သူ့တပ်က အတော် စနစ်ကျတယ်။ ဆေးရုံတောင် ရှိတယ် ” ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်ဘက်က တပ်မှူးရဲ့ ပြောစကားကို ဒီကားမှာ ကြားရမယ်။အဲ့ဒါတွေထက် ပိုကြီးအရေးကြီးတာ တစ်ချက်ရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီကားကို စစ်ကားလို့ ယူဆပြီး ကြည့်မယ့်သူတွေကို ပြောချင်တာပါ။
အမှားကြီး မှားသွားပါလိမ့်မယ်နော်။ ဘာလို့ဆိုတော့စစ်ကားမို့ ပစ်တာခတ်တာ ဗုန်းကွဲတာတွေကို အရမ်းလှတဲ့ shot တွေနဲ့ စစ်သားတွေ စတိုင်မိမိ ပြေးလွှားနေတာတွေ လုံးဝ မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။“ သတင်းထောက်။ ။ တော်လှန်ရေးကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲChe ။ ။
ကြီးမားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဓာတ် မရှိပဲ တော်လှန်ရေးကို လုပ်ကို လုပ်လို့မရပါဘူး ”ဟုတ်ပါတယ်။ အဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Che ရဲ့ စကားလိုပါပဲ . . ဒီ ဇာတ်ညွှန်းကြီးတစ်အုပ်လုံးမှာလည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လူသားဆန်မှု၊ အမှား အမှန်၊ ရွာသားတွေနဲ့ တော်လှန်ရေးစစ်သားတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ အထူးဖြင့် Che ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့ ဘဝကိုသာ မြင်ရမှာပါ။
တစ်ခါတလေ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲလုံးကို သေနတ်ပြောင်းက ကျည်ထွက်နေတာပဲ ပြပြီး ပြီးရင်လည်း ပြီးသွားပါတယ်။ စစ် တကယ်ဖြစ်နေတာကို ပြရင်လည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြီးပဲ ပြပါတယ်။ ဘာမှ မကွန့်ထားဘူး။ဒီကားရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဟာ . . not about ဒုန်းဒုန်းဒက်ဒက် ပါ။ it’s about loving kindness ပါဗျာ . . ။
ဒီတော့ ချခန်းပါမှ ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Che က ရှောင်သင့်တဲ့ ကားပါ။
Miss Lady Professor – Link 3
Love Lesson – Link 2